Izinsongo zokubulawa, umdonsiswano ezinkantolo embangweni wokuhola i-ANC | News24
Izinsongo zokubulawa, umdonsiswano ezinkantolo embangweni wokuhola i-ANC
Cape Town – Izinsongo zokubulawa kanye nomdonsiswano wasezinkantolo kuyizinkomba zombango oshisaphansi wokulawula i-African National Congress (ANC) njengoba izinhlangothi ezingaboni ngasolinye zibhekene ngeziqu zamehlo ezifundazweni ngaphambi kokuba leli qembu likhethe umholi omusha ozothatha izintambo kuMengameli Jacob Zuma.
Esifundeni okuyisona esinamalungu emaningi e-ANC, KwaZulu-Natal, inkantolo kulindeleke ukuthi inqume ngenyanga ezayo esicelweni samanye amalungu aleli qembu sokuba kuguqulwe ukhetho lokukhetha ubuholi besifundazwe nalapho kwakhethwa khona abaholi abasondelene noZuma ngo-2015 kulandela lokho abakubiza ngokungahanjiswa kahle kohlelo. Esifundazweni iFree State, uSekela Sihlalo weqembu, uThabo Manyoni, ufuna ukungena esikhundleni salowo onguSihlalo wesifundazwe, u-Ace Magashule, omunye umlandeli kaMengameli Zuma osehole lesiya sifundazwe iminyaka engu-23.
OLUNYE UDABA:IZITHOMBE: Bafike ngobuningi enkantolo kwelokuphikisana nobuholi be-ANC eKZN
Noma ngabe ubani owina le midonsiswano eqhubekayo uzoya engqungqutheleni yokukhetha ubuholi beqembu ngoDisemba eyimfivilithi ekubeni nomthelela ngekusasa leNingizimu Afrika kwezepolitiki. Labo abaseka uZuma bakhankasela lowo owayenguSihlalo we-African Union Commission, uNkosazana Dlamini-Zuma, futhi owayenguNkosikazi kaMengameli, ukuze ahole iqembu, ngesikhathi uManyoni kanye nezinye izikhulu ezinganeme KwaZulu-Natal zeseka uSekela Mengameli, uCyril Ramaphosa, nongomunye ogaqele esobuMengameli.
“Uma ngabe imiphumela yokhetho lwango-2015 iguqulwa, kuzoba enkulu, enkulu impi, futhi kungaguqula izinto zisuke kwi-ANC kaZuma, futhi zisuke emkhankasweni kaDlamini-Zuma,” kusho uSusan Booysen, noyiPolitical Science Professor e-University of the Witwatersrand’s School of Governance, eJohannesburg. “Icala lasenkantolo lizonquma okukhulu, ayi nje kwi-ANC kodwa ngekusasa lezokhetho lweNingizimu Afrika.”
UManyoni uthi ukuba muncu kwesimo ngomkhankaso wakhe wokuhola i-ANC eFree State kukhombisa ngokusobala ukuthi umbango ushubilie.
“Kunezinsongo zokubulawa,” uManyoni usho kanjalo engxoxweni. “Angeke ngiyeke, i-ANC yilona kuphela ikhaya engilaziyo. Ngesikathi ngilwa nezinhlaka zobandlululo ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi ngingase ngingaliboni ikusasa.”